10 Izindawo Zokuqasha Ezisabekayo EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Izindawo Zokuqasha Ezisabekayo EYurophu
Ubumfihlo, 5-izinsiza zehhotela lezinkanyezi, ukubukwa obumangalisayo, nendawo, Okulandelayo 10 amabala athole konke. Lezi 10 izindawo eziqashisayo zokuqasha amaholide eYurophu zizungezwe imvelo emangalisayo futhi ziza nezinzuzo ezimangalisayo.
1. Indawo Eqashisayo Yokuqashiswa Kweholide EFrance: Provence
Amakotishi amatshe, izindlu zasendulo zaseFrance, izintaba ezinhle zeDentelles de Montmirail, Provence ingenye 10 izindawo ezinhle kakhulu zokuqasha amaholide eYurophu.
Okokuqala, ukuvuka iphunga le-lavender nokukha i-cherry ezihlahleni kungenye yezinto ezinhle kakhulu ongazenza eProvence. Okwesibili, ukuncoma iMont Ventoux enhle evela emafasiteleni endlu yezwe lakho kuzodlula noma yiliphi iphupho owake waba nalo leholide elihle.
EProvence, unezindawo eziningi zokuhlala ongaziqasha: Izindawo zokugcina amapulazi, izindlu, namakotishi amahle. Konke ukuqashwa kwamaholide kuhlome ngokuphelele ukusingathwa kwemindeni enezingane, noma amaqembu abangane.
Kusukela $136 Okwe 2 ifulethi lokulala ku $350 i-villa, ubusuku ngabunye.
2. Indawo Engcono Kakhulu Yokuqasha EYurophu E-Italy: Tuscany
Isigodi sewayini saseTuscan siyindawo enhle yokuqasha amaholide e-Italy. Amagquma asilika ayindawo enhle yeholide yokuphumula. Ngokwesibonelo, isiqhingi esimangalisayo seGiglio, noma isigodlo sezindela saseFranciscan eLa Verna, yimisebenzi emihle eyehlisiwe esifundeni esihle saseTuscan.
Ngaphezu kwalokho, ukuvuka ekuseni, ukuphuma endlini yepulazi yezwe kuya emibonweni enhle yeTuscany – ayigugu. Lapha, ungakhetha ekupholeni echibini langasese ngengilazi yewayini, noma ukuthatha uhambo iwayini.
Ama-Villas, ezindlini, nezindlwana.
$68 ukuze $200 ubusuku ngabunye.
Imisebenzi Yezingane: Impela! Ngenkathi abantu abadala bezitotosa, izingane ziqhume ezingadini zezilwane ePistoia noma eCavallino Matto iphaki lokuzilibazisa in Livorno.
UFlorence waya eGrosseto Ngesitimela
IPerugia iya eGrosseto Ngesitimela
IViterbo eya eGrosseto Ngesitimela
IRoma iya eGrosseto Ngezitimela
3. Indawo Engcono Kakhulu Yokuqasha E-UK: ENtshonalanga yeNgilandi
Ogwini emangalisa, amadokodo amatshe, ukushona kwelanga okuhle, nokuzola, yenza iSouth West England indawo ekahle yokuqasha iholide emaphandleni amaNgisi. Ngaphezu kwalokho, le amadolobha amahle asogwini AbakwaDevon noDorset balondoloze ubuhle babo eminyakeni edlule futhi bama beqinile ezandleni zesikhathi nemimoya enosawoti.
Ukuhamba emabhishi egolide, bebabaza amadwala kaSimon Old Harry, noma iJurassic Coast, shaya ukuphuka kwedolobha nganoma yisiphi isikhathi. Ngenkathi ngihlala lapha, uzozizwa ukuthi ubuyela emuva emuva kusukela esikhathini sangaphambi komlando kuye ku- 17th ekhulwini. I-landscape inokutshela izindaba zesikhathi nenkambo yemvelo kule ngxenye ye-England, kuyilapho izindlu ezifulelwe ngotshani noma zendabuko zizokutshela ngempilo namasiko aseWest England.
Ngakho, uma uthanda isiko lamaNgisi, izingadi, izakhiwo, nezinganekwane – lapho-ke uzothola ukuthi iWest England inezindawo ezinhle kakhulu zokuqasha amaholide eYurophu.
$70- 320 ubusuku ngabunye
4. Indawo Eqashisayo Yokuqasha Indawo eSwitzerland: Ngaya Okhahlamba LwaseSwitzerland
With kuka 10,000 ongakhetha yokuhlala, le Ngaya Okhahlamba LwaseSwitzerland ziyindawo enhle yokuqasha amaholide eYurophu. Ububanzi bezintaba zaseSwitzerland obumangalisayo, inikeza imibono engcono kakhulu, landscape, imizila, kwenkundla, izindawo eziqashisayo zokuqasha amaholide, lokho kuzokwenza umhlathi wakho wehle.
Enye yezinto ezinhle kakhulu ngokuqashwa kwamaholide eSwitzerland Alps ukuthi kukhona ikhaya lanoma yikuphi ukunambitheka neqembu. Okwemindeni, amaqembu wabangane, ngoshubhu ongaphandle oshisayo, ama-chalet, ukubukwa kwentaba noma kwesigodi - I-Alps yaseSwitzerland ihluke kakhulu kangangokuba iyindawo ekahle yokuqasha iholide yanoma ngubani.
Ngakho, manje kufanele ukhethe phakathi izindawo ezingasetshenziswanga njengoLucerne, noma isigodi sezimpophoma, ichibi iMaggiore noma ukubukwa kwezintaba ohambweni lwakho oluya eholidini elingenakulibaleka kakhulu.
Chalets, ezindlini zamapulangwe, izindlu, noma amafulethi.
Kusukela $92 efulethini ukuze $265 ubusuku ngabunye kusihlalo sangasese noma indlu enokubukwa kwechibi.
5. Izindawo Zokuqasha Ezisabekayo eFrance
IFrance iyindawo emangalisayo yokuqashwa kwamaholide eYurophu. Ngezindawo eziningi ezinhle futhi eziguquguqukayo, sikuthole kunzima impela ukukhetha indawo eyodwa kuphela enhle yokuqasha iholide eholidini lakho elilandelayo laseFrance.
Ngokwesibonelo, IBiarritz inamabhishi amahle kakhulu, ngenkathi isigodi saseDordogne sinikeza ukubukwa kwezintaba nemifula okumangalisayo.
Kungaba indawo yokuqasha iholide oyikhethayo, ukuqasha kwakho okumangalisayo kweholide kuzohlomiswa ngokuphelele, ngezingadi ezinhle, nasezifundeni ezinhle kakhulu eFrance.
EBrittany, uzothola izinqaba zokuqashwa kwamaholide, noma ikotishi elinomkhondo wangasese ogwini oluhle.
$75 – $145 ubusuku ngabunye
I-Nantes iya eTours With A Train
ULille waya eTours With A Train
ULille waya eParis Ngesitimela
6. Indawo Eqashisayo Yokuqasha Eholidini ECzech Republic: Bohemia
IBohemian Switzerland ingesinye sezindawo ezinhle kakhulu eYurophu. Ngenxa yezintaba zamatshe amatshe amangalisayo nokubukwa komfula i-Elbe, ICzech Switzerland iyipharadesi lamaholide. Ngakho, kuyindawo enhle yokuqasha iholide eYurophu.
Le ndawo inikeza ukubukwa okuhle, imizila eminingi yokuhamba izintaba, umndeni izindawo zepikinikini, nomfula wokubhukuda.
Imizi yanamuhla esondelene kakhulu nemvelo yasendle, nempilo ka 100 iminyaka eyizigidi. Idolobha laseDecin liyindawo enhle yokuqasha ikhaya lakho kude nasekhaya.
$90 – $150 ubusuku ngabunye
7. Indawo Eqashisayo Yokuqashiswa Kweholide E-Austria: IStyria
Kutholakala eningizimu-mpumalanga ye-Austria, i-Styrian Alpine landscape ingenye yezindawo ezinhle kakhulu e-Austria. Ngakho-ke, ISytria yindawo enhle yokuqasha amaholide eYurophu: imibono, inguzunga yeqhwa, amadlelo aluhlaza, nemvelo ebabazekayo.
Ngaphezu kokubukwa okuhle kakhulu nemizila yokuhamba izintaba, eSytria, uzokhululeka ngokuphelele ngemuva kokuvakashela i- iziphethu zemvelo ezishisayo. Kungenjalo, sibonga izihlahla eziningi zama-apula nezivini, ungabeka ikhanda lakho, noma ujabulele ipikinikini emnandi.
ezindlini zamapulangwe, izindlu ezinamachibi, ama-chalet.
$65 – $200 ubusuku ngabunye
8. Indawo Eqashisayo Yokuqashiswa Kweholide: London
ILondon ngenye yezindawo ezinhle kakhulu zokuqasha amaholide eYurophu ngoba idolobha lezinketho ezingapheli. Lapha uzothola izindawo eziyingqayizivele nezinhle, ngobuciko obuhlukile, isiko, futhi kudlidliza. UNotting Hill uyaphupha, IHampstead Heath ingeyendabuko futhi iyaqhakaza, kanti iKensington iyathandeka futhi iyimfashini. Lezi izibonelo ezimbalwa kuphela zezindawo ezinhle zokubekisa ukuqasha kwakho okulandelayo kweholide kude nasekhaya.
Ngaphezu kwalokho, ILondon inikeza izinto eziningi kakhulu, izimakethe, iminyuziyamu, namapaki anoma ikuphi ukunambitheka nohlobo lweholide. Ngakho-ke, ILondon izoba ngumnqobi ophelele we amaholide omndeni eYurophu nezingane: amapaki wokuzijabulisa, Izitolo ezinhle kakhulu zekhekhe, noHarry Potter kunjalo.
Ukuqashwa kwamafulethi maphakathi neLondon, namakhaya angaphandle kweLondon, depending on the zone.
9. Indawo Eqashisayo Yokuqashiswa Kweholide EJalimane: Bavaria
IBavaria ingesinye sezindawo ezinhle kakhulu eJalimane, ikakhulukazi entwasahlobo. Ukusuka e-Alps kuye emfuleni iDanube, umculo, kanye nezibiliboco zaseBavaria, ngezinto eziningi okufanele zenziwe, a 10-uhambo losuku eBavaria kungenzeka kunganele ukujabulela konke lokhu okuqhamuka kule ndawo ekhangayo.
Ngakho, kufanele uhlele kahle kusengaphambili ngeholide lakho eBavaria. Njengoba iBavaria ingenye yezindawo zamaholide ozithandayo eJalimane, kubantu bendawo nabavakashi, Ukuqashwa kwamaholide kuvame ukubhukhelwa ezinyangeni ezimbalwa ngaphambi kwesikhathi. Ngaphezu kokubhuka indawo yokuhlala, ukwenza okuhle kakhulu eholidini lakho laseBavaria, cwaninga futhi wakhe uhlu lwezinto eziphezulu nemisebenzi okumele uyenze, futhi ube nohambo olujwayelekile.
Ama-Villas, ezindlini, nezindlu.
$80- $350 ubusuku ngabunye
10. Indawo Eqashisayo Yokuqasha Eholidini E-Italy: Lake Como
ILake Como ingesinye sezindawo zamaholide ezidume kakhulu e-Italy. Ngaphandle kweqiniso lokuthi lingagcwala kakhulu ngesizini yasehlobo, ichibi elimangalisayo nokubukwa kwezintaba, nomoya opholile, beka iLake Como kufayela le- 10 izindawo ezinhle kakhulu zokuqasha amaholide eYurophu.
Isikhathi esihle soku iholide eLake Como kuphakathi kukaMashi kuya kuNovemba, lapho uJulayi-Agasti kuyizinyanga ezifudumele nezimatasa kakhulu. Ngakho, kubaluleke kakhulu ukuthi wenze ucwaningo lwakho kusengaphambili. Ngakho-ke, into ebaluleke kakhulu ukubheka indawo yokuhlala nezinzuzo nezingozi zokubekisa ukuqashwa kwamaholide echibini, nganoma iyiphi ingxenye yonyaka.
Villas zikanokusho, ezindlini, ama-chalet, nezindlwana.
$40 ngosuku kuya $500 ngesonto
UFlorence uya eComo Ngesitimela
EMilan ukuya eComo Ngesitimela
ITurin iya eComo Ngesitimela
IGenoa iya eComo Ngesitimela
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukusiza ukuhlela uhambo oluya e- 10 izindawo ezinhle kakhulu zokuqasha amaholide eYurophu. Uhambo lwesitimela oluya lapho uya khona kanye nekhaya eliyiphupho kude nasekhaya kuyindlela esheshayo futhi engabizi kakhulu yokuhamba.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “1o Awesome Vacation Rental Places In Europe” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Fvacation-rental-places-europe%2F- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)